Ny fiarovana aloha dia fiarovana hatrany amin'ny lalana Dubai | Orinasa Mpampanoa lalàna
"Ny lozam-pifamoivoizana, ary indrindra ny lozam-pifamoivoizana sy ny arabe, dia tsy mitranga - izy ireo no mahatonga." nataon'i Ernest Greenwood
Ny sisa dia lozam-pifamoivoizana 1.783 no voasoratra tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Aogositra, araka ny nambaran'ny talen'ny departemantan'ny jeneraly fitaterana, Col Jamal Al Bannai. Ny fahita indrindra amin'ny lozam-pifamoivoizana dia misy ifandraisany amin'ny lozam-pifamoivoizana, ny lozam-pifamoivoizana ary ny lozam-pifamoivoizana niseho. Maherin'ny antsasaky ny maty no naterak'ireto loza ireto vokatry ny lozam-pifamoivoizana.
Inona no tokony hatao aorian'ny lozam-pifamoivoizana UAE
Tsy misy azo antoka amin'ny lozam-piarakodia. Rehefa tratra ianao a lozam-piaramanidina UAE, tandremo mba hanao dingana ara-dalàna maromaro momba an'io resaka io. Na izany aza, alohan'ny hanohizantsika ny dinika, dia ndao isika hanao ny fitovian-kevitra eo amin'ny kely sy ny lehibe lozam-piarakodia ao Dubai.
Raha sendra tsy ampy taona lozam-piarakodia ao Dubai, hangataka anao ny mpitandro ny filaminana hifindra ny fiara amin'ny sisiny azo antoka kokoa mba tsy hisakanana ny fifamoivoizana ary hiteraka olana ho an'ny fiara hafa eny an-dalana. Raha tsy mankatò ny fitsipika ianao dia ho voasazy. Rehefa avy nohazavainao tamin'ny ankolafy ilay raharaha ary fantaro hoe iza no tokony homena tsiny, dia asaina mitondra fiara any amin'ny biraon'ny polisy akaiky indrindra ianao hamenoana endrika mifanaraka.
Raha ny lehibe indrindra lozam-pifamoivoizana Dubai, hanome anao maintso ny tatitra maintso ny polisy raha hita fa tsy manan-tsiny ianao. Raha tsy izany, raha hita fa meloka ianao, dia omen'ny polisy anao ny tatitra mavokely momba ny raharaha. Araka ny voalazan'ity farany dia angatahina handoa vola ianao. Io ny tambin-karama raha ny amin'ny fitakiana ny fanonerana ny lozam-pifamoivoizana.
Mandritra izany fotoana izany dia tokony hoheverinao ireto zava-misy lehibe ireto. Tokony ho fantatrao na tsia ny anao Orinasa fiantohana ao Dubai manome serivisy fanampiana eny an-dalambe na tsia. Raha toa ka manome ny serivisy voalaza etsy ambony ny orinasa, manamboatra ny fiaranao ary mitondra azy any amina atrikasa (raha ekena ny toetry ny fiara) dia ho eo ambany andraikitry ny orinasa. Raha tsy afaka mangataka fanamboarana fiara ianao dia hamboarina eo amin'ny atrikasa eo amin'ny tontolon'ny fiantohana ny orinasa. Noho izany, mifidy ny tsara Orinasa fiantohana ao Dubai dia tena manan-danja tokoa rehefa miatrika ny olan'ny inona no tokony atao aorian'ny lozam-pifamoivoizana UAE.
Ahoana no fangatahana?
Samy manana ny zony ny tsirairay rehefa naratra tamin'ny lozam-pifamoivoizana. Misy tranga tokony handefasanao raharaha ara-dalàna momba ny momba anao fitakiana onitra. Fangatahana momba ny lozam-piaramanidina UAE miovaova arakaraka ny toe-javatra. Io koa dia manondro ny vola tokony haloa amin'ity lafiny ity. Ny onitra dia tokony ho marim-pototra ary miankina amin'ny tranga mifandraika amin'ny tranga lozam-pifamoivoizana nomena. Raha sendra maty dia vokatry ny nomena lozam-piaramanidina UAE, tokony ho fantatrao hoe ahoana mitaky vola ra. Ity farany dia heverina ho tambin'antoka 200.000 AED tokony hatao, na inona na inona ny fahafatesana dia vokatry ny loza na noho ny kisendrasendra. Ankoatra ny fangatahana trosa dia tokony ho fantatrao tsara ny momba ny karazan-javatra hafa rehetra fangatahana onitra koa mba tokony hanao dingana hendry kokoa ianao amin'ny raharaha iray a lozam-pifamoivoizana Dubai.
Hahazoana tsara kokoa momba ny zonao, hitaky ny zonao, ary ireo olana rehetra momba ny politika fiantohana nomena Orinasa fiantohana ao Dubai any UAE, tokony hiresaka amin'ny matianina matihanina ianao raha miahiahy ianao inona no tokony hatao taorian'ny lozam-piarakodia tany UAE.
Misafidiana ny ratra amin'ny mpisolovava tsara indrindra
Mitodika any ankavanana mpisolovava noho ny fitakiana tsy nahy or mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana dia zava-dehibe tokoa raha te hahomby amin'ny raharaham-pitsarana ianao, na raha mitady torohevitra tsara indrindra momba ny lalàna momba ny anao fotsiny lozam-pifamoivoizana ao Dubai. Azo Itokisana mpiaro ny fangatahana dia hanao izay fara heriny hahatratrarana valiny mahafa-po indrindra ho anao ary handresy ny raharaha. Izy ireo dia hanazava ny adidinao sy ny zon'ny lalàna mba tsy hamelanao ny tranga misy anao.
Miaraka amin'ny mpisolovava ratra manokana, dia tsy ho sarotra aminao ny hahita hoe iza no tokony ho diso, izay Orinasa fiantohana ao Dubai hisafidy, ny fomba hifandraisana amim-pahombiazana amin'ireo fety misy loza, ary hahitanao ny vahaolana tsara indrindra amin'ny olan'ny lozam-piarotanao. Ankoatr'izay, olo-malaza Mpisolovava amin'ny fahavoazana hametraka ny ezaka rehetra hataony amin'ny famahana ny olana rehetra ary hahita ny vahaolana mahomby indrindra aminao fitakiana onitra ka manaisotra anao amin'ny adin-tsaina sy ny tebiteby mifandray amin'ny lozam-piarakodia anao.
Hevitra 4 momba ny "Ny fiarovana voalohany dia ny fiarovana hatrany amin'ny làlana Dubai"
03/01/2015 amin'ny 7:32 PM
Ny vadiko dia nitondra kodiarana 4 tamin'ny volana aprily 2014, avy amina marika fanta-daza, 4 andro niverina rehefa nitondra ny fiara nirehitra izy, tsy fantatra ny antony nahatonga ny afo fa fiara vaovao sy serivisy sahaza notazonin'ny masoivoho io. misaotra an'Andriamanitry ny zava-nitranga fa teo amin'ny toerana tena nahitana olona no nanangona afo hamonoana ny afo ary namela azy tsy hirehitra intsony. Nifandray tamin'ny polisy Dubai izay naka ny fiara izy ary nitsidika ny tobin'ny polisy ihany koa mba hanambara. Te hitory ny orinasa fiara fotsiny aho noho ny antony. Raha toa ka nitranga teny amin'ny làlambe ity tranga ity dia ho hafa ny tantara niarahan'izy rehetra.
Mikatsaka fitarihana handeha aho ankehitriny, satria takiana amin'ny fandrahonana ny fiainana ary tsy hitranga amin'ny olon-kafa sy lesona ho an'ny orinasa fiara.
08/31/2015 amin'ny 9:43 maraina
Miangavy anao azafady mba firy taona izay afaka mitaky valifaty amin'ny orinasa fiantohana ny mpampiasa.
Niharan'ny lozam-pifamoivoizana ny vadiko tamin'ny 2009 ary tamin'io fotoana io dia Aed 10,000 ihany no nandoavan'ny fiantohana ny fiara nandona azy ary tsy nifanaraka izahay. Mbola azo atao ve ny mitaky ny tambin-karamany noho ny lozam-pifamoivoizana satria tapaka ny humerus ary naharitra 6 volana ny fitsaboana azy ary araka ny tatitry ny mpitsabo dia misy isan-jaton'ny fahasembanana.
Miangavy anao azafady raha mbola manan-jo hitaky an'io fiantohana io ny vadiko.
09/01/2015 amin'ny 2:20 PM
Nanao sonia antontan-taratasy avy amin'ny orinasa fiantohana ny lozam-pifamoivoizana ve ianao? Inona ny vola laninao indrindra? azafady zarao ny antsipirihany case@lawyersuae.com